चिनियाँ सेना परमाणु बम खसाल्ने ७७ विमान सहित ताइवान घुस्यो, के हुन्छ अब ? — Imandarmedia.com
चिनियाँ सेना परमाणु बम खसाल्ने ७७ विमान सहित ताइवान घुस्यो, के हुन्छ अब ?
एजेन्सी। चीनको ताइवान कब्जा गर्ने दृढदा दिनदिनै मजबुत बन्दै गएको छ। गएको शुक्रबार मात्र ताइवानले ३८ वटा चिनियाँ लडाकु विमान आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताएको थियो। शुक्रवार भएको त्यो घटना बेइजिङको अहिलेसम्मकै ठूलो घुसपैठ भनिएको थियो।
तर त्यसको भोलिपल्टै शनिवार चीनले ३९ लडाकु विमान पुनः ताइवानको हवाई क्षेत्रमा पठायो। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार दुई दिनको अन्तरालमा चीनले परमाणु बम खसाल्ने क्षमता सहितका ७७ विमानहरू आफ्नो ‘एअर डिफेन्स आइडेन्टीफिकेसन जोन’ भनिने हवाई प्रतिरक्षा पहिचान क्षेत्र भित्र पठाएको हो।
लगत्तै ताइवानले आफ्ना लडाकु विमानहरूको परिचालन गर्नुका साथै क्षेप्यास्त्र प्रणाली तैनाथ गरेर प्रतिक्रिया जनाएको छ। चीनले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको ताइवानलाई आफ्नो प्रान्तको रूपमा हेर्ने गरेको छ भने ताइवानले आफूलाई छुट्टै सार्वभौम देश ठान्छ। ताइवानले विगत एक वर्ष यता चिनियाँ वायु सेनाले आफ्नो टापु नजिकै यस्ता मिसनहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै आएको छ।
चीन क्षेत्रीय शान्ति बिथोल्न नियोजित रूपमा सैन्य आक्रमणमा संलग्न छ,’ ताइवानका प्रधानमन्त्री सु जिन चाङले भनेका छन्। यसअघि चीनले यस्ता उडानहरू आफ्नो सार्वभौमसत्ता रक्षा तथा ताइवान र अमेरिकाबीचको साँठगाँठ विरुद्ध लक्षित रहेको बताएको थियो।
एअर डिफेन्स आइडेन्टीफिकेसन जोन’ देशको भूगोल र हवाई सीमा बाहिरको क्षेत्र हो जहाँ विदेशी विमानहरू राष्ट्रिय हितका लागि पहिचान, निगरानी र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यो स्वघोषित क्षेत्र हो र प्राविधिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। ताइवानका कतिपय टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि जनाउन बेइजिङले समय समयमा यस्ता मिसनहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ।
ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले परमाणु बम खसाल्ने क्षमता सहितका विमानहरू “एअर डिफेन्स आइडेन्टीफिकेसन जोन भनिने आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा पहिचान क्षेत्र भित्र दुई चरणमा प्रवेश गरेको जनाएको छ।लगत्तै ताइवानले आफ्ना लडाकु विमानहरूको परिचालन गर्नुका साथै क्षेप्यास्त्र प्रणाली तैनाथ गरेर प्रतिक्रिया जनाएको छ।
चीनले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको ताइवानलाई आफ्नो प्रान्तको रूपमा हेर्ने गरेको छ भने ताइवानले आफूलाई छुट्टै सार्वभौम देश ठान्छ।ताइवानले विगत एक वर्ष यता चिनियाँ वायु सेनाले आफ्नो टापु नजिकै यस्ता मिसनहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै आएको छ। चीन क्षेत्रीय शान्ति बिथोल्न नियोजित रूपमा सैन्य आक्रमणमा संलग्न छ,” ताइवानका प्रधानमन्त्री सु जिन चाङले शनिवार सम्वाददाताहरूसँग भने।
बेइजिङस्थित चीन सरकारले यो समाचार तयार पार्दासम्म घटनाबारे कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गरेको छैन।यसअघि उसले यस्ता उडानहरू आफ्नो सार्वभौमसत्ता रक्षा तथा ताइवान र अमेरिकाबीचको साँठगाँठ विरुद्ध लक्षित रहेको बताएको थियो।ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले वक्तव्य मार्फत २५ चिनियाँ पिपुल्स लिवरेसन आर्मीका विमानहरू आफ्नो दक्षिण पश्चिमी हवाई प्रतिरक्षा पहिचान प्रणालीमा प्रतास टापुमाथि दिउँसै प्रवेश गरेको जनाएको छ।
त्यस लगत्तै शुक्रवार साँझ ३१ वटा थप विमानहरू त्यही क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरू ताइवान र फिलिपिन्सको समुद्रमाथि उडेका थिए।ताइवानका अनुसार चार वटा परमाणु हतियार बोक्ने क्षमताका एच-६ बमवारि गर्ने विमानहरू थिए भने एउटा पनडुब्बीमाथि आक्रमण गर्ने क्षमता राख्ने विमान थियो।
“एअर डिफेन्स आइडेन्टीफिकेसन जोन” देशको भूगोल र हवाई सीमा बाहिरको क्षेत्र हो जहाँ विदेशी विमानहरू राष्ट्रिय हितका लागि पहिचान, निगरानी र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यो स्वघोषित क्षेत्र हो र प्राविधिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। ताइवानका कतिपय टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि जनाउन बेइजिङले समय समयमा यस्ता मिसनहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ।
पछिल्लो मिसन के कुराको असन्तुष्टिका लागि थियो भन्ने खुल्न सकेको छैन। गत महिना मात्रै चीनले १९ वटा र जुन महिनामा १८ वटा विमानहरू ताइवानको प्रतिरक्षा प्रणाली क्षेत्रमा पठाएको थियो।
ताइवान चीनको कब्जामा गए एसियाको शान्ति खल्बलिनेछः राष्ट्रपति साइ इंग–वेन: चीनले लगातार ताइवानको हवाई रक्षा क्षेत्रमा सयौं लडाकु विमानहरु पठाएपछि ताइवानकी राष्ट्रपति साइ इंग–वेनले मुख खोलेकी छिन्। उनले चीनको आक्रामक गतिविधिको निन्दा गर्दै ताइवानले चीनसँग सैन्य टकराव नचाहेको उल्लेख गरिन्।तर चीनले ताइवानमा आक्रमण गरेको खण्डमा भने ताइवानले आफ्नो क्षेत्र जोगाउन अपनाउनु पर्ने जति उपाय सबै अपनाउने उनको भनाइ छ।
गएको चार दिनमा चीनका डेढ सय जति लडाकु विमान ताइवानको हवाई क्षेत्रमा घुसेको बीबीसीले जनाएको छ। यसबीचमा राष्ट्रपति साइले फरेन अफेयर्स पत्रिकासँग चीनबारे बोलेकी हुन्। उनका अनुसार यदी चीनले ताइवान कब्जा गरेमा त्यो घटनाले पुरै एसियाको शान्ति खल्बलिनेछ। यसले एसियाको शान्ति र लोकतन्त्रमा विनाशकारी परिणाम निम्त्याउनेछ।
हालै अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ता नेड प्राइसले चीनको विमानहरु ताइवानको हवाई प्रतिरक्षा क्षेत्रमामा घुस्नुलाई उत्तेजक र अस्थिर सैन्य गतिविधि भनेका थिए। हामी ताइवानको नजिकै भएको चीनको उत्तेजक सैन्य गतिविधिबाट धेरै चिन्तित छौं,‘अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ता नेड प्राइसले एक विज्ञप्तिमा भनेका थिए।
‘हामी ताइवान बिरुद्धको चिनियाँ सैन्य, कूटनीतिक, र आर्थिक दबाब रोक्न आग्रह गर्दछौं। प्राइसले चिनियाँ गतिविधिले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा धक्का लाग्ने पनि बताइरहँदा जापानले पनि ताइवान र चीनले विवादलाई कूटनीतिक रुपमा सुल्झाउनुपर्ने बताएको छ। चीन ताइवानलाई आफ्नो भूमि भएको बताउँछ र जहिल्यै भएता पनि ताइवान चीनमै विलय हुने त्यहाँको राष्ट्रपति सी चिनफिङले बताउँदै आएका छन्।
चीनबाट अलग्गिन खोजे ताइवानलाई आक्रमण गरेरै कब्जा गर्ने चीनको भनाइ छ।पछिल्लो समय चीनको आक्रामक गतिविधि ताइवानमा थप बढेको देखिएको छ। जसले चीनको ताइवान कब्जा गर्ने दृढता थप मजबुत हुँदै गएको देखाउँछ। तर ताइवानले चीनको नीति त्यहाँ नचल्ने र आफू एक सार्वभौम मूलुक भएको बताउने गर्दछ।
बेइजिङले कुनै न कुनै बेला यो टापुलाई आफ्नो क्षेत्रमा गाभिछाड्ने बताएको छ। पछिल्लो समय यस टापु फिर्ता लिन चीनले शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ। तर ताइवानले आफू स्वतन्त्र मूलुक भएको अडान छाडेको छैन। त्यहाँ चीनको नीति लागू नहुने ताइवानको भनाइ छ। त्यसकारण हालका वर्षहरूमा सो क्षेत्रमा तनाव बढिरहेको छ। ताइवानले पनि चीनको सम्भावित आक्रमणविरुद्ध युद्ध अभ्यास गरिरहेको छ।